Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့​နယ်တချို့​ စာသင်ကြား​ရေး​ ပျက်ယွင်း​
ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့​နယ်တချို့​ စာသင်ကြား​ရေး​ ပျက်ယွင်း​
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခ​တွေဖြစ်တုန်း​က ပိတ်ထား​တဲ့​ ​ကျောင်း​တွေဟာ ခုထက်ထိ ပြန်မဖွင့်​နိုင်​သေး​သလို ဖွင့်​တဲ့​ကျောင်း​တွေကိုလည်း​ လုံခြုံ​ရေး​ကြောင့်​ ​ကျောင်း​သား​ လာ​ရောက်မှု နည်း​နေပါတယ်။
အစိုး​ရက စစ်​တွေ၊​ ရ​သေ့​တောင်၊​ ဘူး​သီး​တောင်၊​ ​မောင်​တော၊​ ​ကျောက်​တော်နဲ့​ သံတွဲမြို့​နယ်​တွေမှာ ​ကျောင်း​ပိတ်ခဲ့​သလို အ​ရေး​ပေါ်အ​ခြေအ​နေ ​ကြေညာထား​ပါတယ်။ ​ကျောင်း​တွေအကုန်မပိတ်​ပေမယ့်​ လုံခြုံ​ရေး​ကြောင့်​ မတက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်​တွေမှာ နာဇီ​ကျေး​ရွာဘက်က ​ကျောင်း​တ​ကျောင်း​သာ ပိတ်​ပေမယ့်​ လုံခြုံ​ရေး​ကြောင့်​ ​ကျောင်း​သား​မိဘ​တွေက က​လေး​တွေကို ​ကျောင်း​မလွှတ်ကြဘူး​လို့​ မြို့​ခံတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
“ပိတ်ထား​တာ​တော့​ မဟုတ်ဘူး​။ ဖွင့်​ထား​ပါတယ်။ ဘယ်လို​ပြောရမလဲ။ ဆရာ ဆရာမ​တွေ​တော့​ ​ရောက်တယ်။ ​ကျောင်း​သား​တွေက ဒီမှာ ၁၄၄ လည်း​ ထုတ်ထား​တယ်။ တည်ငြိမ်မှုကလည်း​ မိဘ​တွေက စိတ်မချ​သေး​တဲ့​အတွက် သား​သမီး​တွေကို မလွှတ်တာ​တွေရှိတယ်။”
ပိတ်ထား​တဲ့​ သံတွဲနည်း​ပညာတက္ကသိုလ်ကိုလည်း​ ပြန်လည်ဖွင့်​လှစ်ဖို့​လည်း​ ပြင်ဆင်​နေပါတယ်။ အဲဒီနည်း​ပညာတက္ကသိုလ်​ကျောင်း​မှာ အ​ဆောင်​နေ ​ကျောင်းသား​တွေ လုံခြုံ​ရေး​အတွက် ကြိတင်ပြင်ဆင်တဲ့​အ​နေနဲ့​ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်​တွေနဲ့​ လတ်တ​လောမှာ အတူမ​နေကြဖို့​ စီစဉ်​နေပါတယ်။
“သံတွဲက လူ​တွေက​တော့​ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး​။ သူတို့​က ​တောင်ကုတ်ဘက်က များ​တယ်။ အမ်း​ဘက်ကရှိတယ်။ အဲ​တော့​ သူတို့​သား​သမီး​အတွက် စိုး​ရိမ်ပြီး​ ပြန်​ခေါ်တဲ့​သ​ဘောပါ။ ​ကျောင်းသား​တွေက အရင်တုန်း​က မွတ်စလင်ရပ်ကွက်​တွေမှာ များ​တယ်ဗျ။ ​ဘော်ဒါသ​ဘောမျိုး​နဲ့​ ​နေကြတာ​လေ။ အခု​တော့​ သူတို့​ကို ပြဿနာကို ​ရှောင်ရှား​တဲ့​အ​နေနဲ့​ သူတို့​ကို မွတ်ဆလင်ရပ်ကွက်​တွေမှာ မထား​ဘဲနဲ့​ ရပ်ကွက်​တွေမှာ ​နေရာ​တွေ စီမံ​ပေး​တယ်လို့​ ကျ​နော်ကြား​တယ်။”
ရ​သေ့​တောင်မြို့​နယ်ကို ​မေး​ကြည့်​ရာမှာ တနင်္လာ​နေ့​ကစလို့​ မြို့​ပေါ်​ကျောင်း​တွေ ဖွင့်​တယ်လို့​ ​ဖြေပါတယ်။
ဘင်္ဂလား​ဒေ့​ရ်ှနယ်စပ်မြို့ ​ ​မောင်​တောမှာလည်း​ ​ကျောင်း​မဖွင့်​နိုင်​သေး​သလို တရွာနဲ့​ တရွာ ကူး​လူဆက်ဆံခြင်း​တောင် မရှိ​သေး​ဘူး​လို့​ မြို့​ခံလူငယ်တဦး​က ခုလို ​ပြောပါတယ်။
“အဲဒီ​နေ့​က​နေ ဒီ​နေ့​အထိကို ကိုယ့်​ရွာက​နေ တခြား​ရွာကို သွား​လို့​မရဘူး​။ ​ဈေး​တွေ၊​ ​ကျောင်း​တွေ ဘာမှလည်း​ မဖွင့်​ရ​သေး​ဘူး​။ ကိုယ့်​ရွာမှာပဲ ရှိတာနဲ့​စား​ပေါ့​။ မရှိတဲ့​လူ​တွေလည်း​ စား​လို့​မရဘူး​ပေါ့​။”
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 09:10
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့​နယ်တချို့​ စာသင်ကြား​ရေး​ ပျက်ယွင်း​ . All Rights Reserved